प्यूठान जिल्लाको संक्षिप्त परिचय
प्यूठान जिल्ला नेपालको लुम्विनी प्रदेशमा अवस्थित एक पहाडी जिल्ला हो । यस जिल्लाको सिमानामा पूर्वमा गुल्मी, पश्चिममा दाङ र रोल्पा, उत्तरमा रोल्पा र वाग्लुङ तथा दक्षिणमा दाङ र अर्घाखाँची जिल्लाहरु पर्दछन् । ८२°.३६” देखि ८०°.३६” पूर्वी देशान्तर र २७°.५५” देखि २८°.२५” उत्तरी अक्षांशको बीचमा फैलिएको यस जिल्ला उत्तर दक्षिण लम्बिदै र पूर्व पश्चिम सांगुरो बन्दै गएको देखिन्छ । समुद्री सतहबाट ३०५ देखि ३६५९ मीटरको उचाईमा अवस्थित यस जिल्लाको क्षेत्रफल १३६५ वर्ग किलोमिटर छ ।
प्यूठान शब्दको उत्पतिबारे कर्कपेट्रीकले प्रार्थाना (पूरथाना) बाट अपभ्रंश हुदै प्यूठान भएको , हयामिल्टनले पुजुठानबाट प्यूठान, ओल्डफिल्डले प्राथाना वाट प्युठान नाम रहन गएको र योगि नरहरिनाथले प्लुथानबाट प्यूठान रहन गएको उल्लेख गरेका छन । अर्थात – प्रतिष्ठाना-प्यूठाना-पिउठाना हुँदै प्यूठान नाम रहन रहन गएको हो । पृथ्वीनारायण शाहले समय-समयमा लेखेको पत्रहरुमा, पिउठानी, पिउठाना भनी उल्लेख गरेको पाईन्छ । सुरक्षा सम्वन्धि शव्द- पिउठ बस्ने ठाना भएकोले पिउठाना बाट अपभ्रंश भई पिउठान् नाम रहन गएको थियो भन्ने तर्क आम रुपमा बलियो रहेको छ ( गिरीः २०६२) ।
प्यूठान जिल्ला नेपाल राज्यको एकिकरण पूर्व गण्डकी क्षेत्रमा विस्तारित चौविसे राज्यहरु मध्ये एउटा शक्तिशाली राज्य थियो । प्यूठाना राज्यको स्थापनाकाल निश्चित रुपमा थाहा पाउने साधन र स्रोतको अभाव छ । वि.सं. १५१५ वा १५६० तिर चन्द वंशी राजाहरुले स्वतन्त्र राज्य स्थापना गरेको भन्ने भनाई भएता पनि किटानी गर्न सकिने अवस्था छैन । प्यूठान राज्यको राजधानी भित्रीकोटमा रहेको र मोदिनर्वर्मनले वि.सं. १५१५ मा आफ्ना कान्छा जुवाई चन्द वंशका लटराज चन्द लाई राजा बनाएका प्रमाण भेटन सकिन्छ । प्यूठान भित्र थुप्रै रजौटाहरु रहेको कुरा पृथ्वीनारायण शाहले काजि कालुपाण्डेलाई लेखेको पत्रमा ”प्यूठाना पर्वत भित्र कति राजा छन….”. भनीनुले पनि पर्दछ ।
वि.सं. १८४३ मा श्रीनाथ सवुज वरख, श्री जङराणा भिम नयागोरख, श्री मेहर भवनी बक्स, दुर्गा बक्स, रामदलपति कंम्पनि र नेपालबाट पर्वत हान्न गएका काजि दामोदर पाण्डे, काजि जगजित पाण्डे, सुवेदार बदलसिंह थापा नयाँ श्रीनाथ समेत भएर धुर्कोट बाटो गरी प्यूठान हान्न आउँदा विना लडाई जित पश्चात नेपाल राज्य भित्र एकिकरण भएको थियो ।
प्यूठान जिल्लाको नामाकरण सर्वप्रथम मगर जातिबाट गरिएको कुरा यहाँका स्थानहरुको नामाकरणबाट बुझिन्छ। भिंगृ, सारी, कोचीवाङ मर्कावाङ, तोरवाङ, खवाङ, स्याउलीवाङ आदि प्राचिन कालमा लिच्छवीकालहरुको अधिनमा रहेको यो जिल्ला पछि खसिया मल्लहरुको अधिनमा १४ औं शताव्दी सम्म रहयो । पाल्पाली राजा मुकुन्द सेनका समकालिन प्यूठानी राजा रुद्रसिंह पछि मोति चन्द्र (प्रथम) यहाँका राजा भए । यिनकी छोरी यशोदाको विवाह मुकुन्द सेन (प्रथम) का नाति कर्णसेनसंग भएको बताइन्छ । मोति चन्द्र पश्चात रुद्रचन्द्र गजेन्द्र चन्द्र गजकेशरी चन्द भएको बुझिन्छ । वि.स. १७६० तिर पृथ्वीपति शाह राजा भएको कुरा उनको ताम्रपत्रमा उल्लेखित छ भने १८३२ मा राजा माणिक चन्दको ताम्रपत्र देखा पर्दछ । वि.स.१८३५ मा मोतिचन्द्र (द्धितीय) प्यूठानका राजा थिए । खुंग्री, भिंगृ, इश्मा र मुसिकोट, प्यूठानका अनुयायी भएको कुरा ध्यामिल्टनले उल्लेख गरेको पाइन्छ । मोतीचन्द्र प्यूठानका अन्तिम भुरे राजा भएको कुरा १८४३ तिर नेपालको एकीकरण अभियानमा यहाँका राजा भागेबाट स्पष्ट हुन्छ । प्यूठानको एकिकरण गरिसकेपछि खुंग्री र उदयपुरका शासकहरु नेपाल नरेशको छत्र छाँयामा रजौटाको रुपमा रहे । खुंग्री र उदयपुरका राजालाई राज्य रजौटा ऐन २०१७ ले आजीवन राजाको प्रदान गरेकोमा हाल उक्त ऐन खारेज गरेपछि रजौटाको अस्तित्व कानुनी रुपमा समाप्त भएको छ ।
विस २०१९ पूर्व प्यूठान भित्रीकोट, नारीकोट, उदयपुरकोट, माडीखोला, कालाशेष र वाइस्खुवागरी ६ थुममा विभाजित भएकोमा २०१९ मा कालाशेष र वाईसखुवा रोल्पा गाभिए । २०१५ सालमा महानिर्वाचन हुँदा प्यूठानमा निर्वाचन क्षेत्र नं.८३, ८४ र ८५ पर्दथ्यो ।२०१७ साल पौष २२ मा पंचायती व्यवस्थाको सुत्रपात पछि २०१९ साल पछि प्यूठान एक निर्वाचित क्षेत्र ९ इलाका, गा.प. ४९ केन्द्र रहेको थियो । जनआन्दोलन पश्चात २०४८ सालमा प्रशासनिक रुपमा यस जिल्लालाई २ संसदिय निर्वाचन क्षेत्र ११ इलाका ४९ गा.वि.स. मा विभाजन गरिएको छ । हाल नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि ७ प्रदेश मध्ये लुम्विनी प्रदेश अन्तरगत पर्दछ यस जिल्लामा ९ वटा स्थानीय तहहरु रहेका छन् त्यसमध्ये २ वटा नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका रहेका छन् । हाल यस जिल्लामा प्रदेश सभाका लागि २ निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधी सभाका लागि १ निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ । यस जिल्लाको सदरमुकाम खलंगा हो ।
धरातलीय हिसावले प्यूठान राज्यलाई निम्न लिखित क्षेत्रमा वांड्न सकिन्छ ।
९१५ मीटर उचाई देखि २१३४ मीटर सम्मको भाग यसमा पर्दछ । घनावस्ती भएको यस भागमा मकै, गैंहु, धान, कोदो, आलु उत्पादन गरिन्छ । तुषारा, नारीकोट, लिवाङ, खवाङ, धुवाङ, कोचिवाङ आदि यस क्षेत्रमा पर्दछन । यस भेगको जंगलमा कटुस चांप, ओखर चिउरी, पिपल टिमुर , चिलाउने, साल आदिका रुख पाईन्छन । सवै किसिमका जात जातिका बसोबास यस क्षेत्रमा पाईन्छ ।
सामान्यतया ९१५ मीटर भन्दा होचो धर्मावती (झिम्रुक), माण्डवी , राप्ती र यिनका सहायक नदीका आसपासका समतल भु-भागहरु यस अन्तर्गत पर्दछन । यस क्षेत्रमा गर्मीमा बढी गर्मी र हिंउदमा न्यानो हावापानी कायम हुन्छ । जनघनत्व तथा उत्पादनको हिसावले महत्वपूर्ण यो भागमा वाग्दुला, पुण्यखोला, विजुवार, क्वाडी, रातामाटा, खैरा, माडीखोला, झिम्रुकखोला, गुरीगाउँ, चिसवाङ, पिडाल्ने, पाडावाङ, देवीस्थान, वाङ्गेसाल, आदि घनाबस्ती भएका गाउँहरु पर्दछन ।
यस जिल्लामा सवै धर्म मान्ने मानिसहरु बसोवास गर्दछन् । जातीय परम्परा अनुसार बिभिन्न जातिमा असारे गीत, तीजका महिलाका ह्रद्यस्पर्सका भैलो, झ्याउरे (झाम्रे) र दोहोरी गितको प्रचलन छ । बैशाखी पूर्णमा, आषाढ पन्ध्रमा दहीच्यूरा खाने, बैशाख सक्रान्ति, जेष्ठासी पूर्णिमामा, भाद्रऔसी, साउने संक्रान्ति, नागपन्चमी, ऋषि तर्पणी पूर्णिमा बडादशै, सरायँ, तिहार, देवाली, कुलपुजा, कार्तिक पूर्णिमा, माघे संक्रान्ति, फागु पूर्णिमा (होली) रामनवमी, ठूलो एकादशी आदि हिन्दू चार्डपर्व प्राय सवैले मनाउछन् । रजवारा मेला, बडारपाटा, खैरा फुलवारीको बृहत मेला, गुरुङको घाटुनाच आदि अत्यन्त रमाइलो साथ मनाउने गर्दछन् । यसको अलवा प्यूठानमा भाईटिकाको भोलीपल्ट तृतीया देखी पञ्चमी तिथी सम्म ३ दिन डल्ले सरायँ (विजुवारनेर) र दाखाक्वाडी हिक्मतेश्वर बगैचाको मेला पनि प्रख्यात छन्। यिनमा लट्टीखेल र तलवारखेल आदि हुन्छन । विजुलीकोटको जात्रा, सारीवाङको मसानपाटीमा हुने कार्तिके जात्रा र मरन्ठाना ठूलासिमको मेला आदि उल्लेखनीय मेला हुन् । खलंगामा घण्टाकर्ण ऋषितर्पणी पूर्णिमासम्म हुने लाखेनाच, गाईजात्रा, पल्टन जात्रा, गणेशजात्रा, र खरजात्रा (माघे पूर्णिमाको दिन) लाग्दछ । यी जात्राहरु सदरमुकाममा मनाउने हुंदा प्यूठानका अतिरिक्त छिमेकि जिल्लाका बासिन्दाहरु पनि अवलोकन गर्न आउने परम्परा छ । नाँचमा पुरुसुङ्गे नाच, मारुनी नाँच, माडीखोले नाँच र अन्य लोकनृत्य निकै रमाइला छन् । यसरी विभिन्न जातजातीबाट बसोबास भएको प्यूठान जिल्ला लोक सांस्कृतिको अपार भण्डार रहेको छ । नेवारका अलगै चाड पनि छन् । मुसलमानका पनि इस्लाम धर्म अनुसारका चार्डपर्व इद, वकरीद, रमजान आदि मनाईन्छ ।